Ogaden News Agency (ONA) – Cudurka Daacuunka oo Gobolka Tigree Kadilaacay & TPLF oo Jawaab Cajiib Ah Kabixisay.
Cudurka Daacuunka oo Gobolka Tigree Kadilaacay & TPLF oo Jawaab Cajiib Ah Kabixisay.
Posted by Dulmane	/ July 26, 2017
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Tigreega ee woqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in uu cudurka dilaaga ah ee daacuunku ka dilaacay qaybo kamid ah Gobolka loogu dhaqaale iyo dhowris badan yahay ee Tigreega.
Sida xogta aan kuhelayno wasaarada caafimaadka ee xukuumada Gumaysiga ayaa qaylo afka kudhufatay kadib markii qaybo kamid ah Gobolka Tigreega laga soo wariyay in uu kadilaacay cudurka dilaaga ah ee Daacuunka.
Sida lagu sheegay hadal kasoo yeedhay wasaarada caafimaadka ee Gumaysiga Itoobiya 54 qof oo kamid ah shacabka kudhaqan Gobolka Tigree ayaa kujira isbitaalada Gobolka kuwaas oo uu haleelay cudurka daacuunku, sidoo kale wasaarada ayaa kadigtay in hadii aan dag dag wax looga qabanin cudurkaas laga yaabo in uu gaysto dhimasho badan oo kudhacda shacabka Tigreega.
Sida aan lawada socono xukuumada gumaysiga Itoobiya ayaa dhagaha kafuraysatay markuu cudurka daacuunku kadilaacay qaybo kamid ah dhulka ay gumaystaan, iyagoo dambi kadhigay kahadalka cudurka daacuunka ee kadilaacay wadanka.
Cudurka daacuun caloolaha ayaa kadilaacay wadanka Ogadenia isagoo dilay boqolaal shacabka ree Ogadenia ah isla markaana sooritay kumanaan kale oo aan helin wax daryeel caafimaad ah oo gumaysiga iyo caalamka midna uga tagay.
Sidoo kale cudurka ayaa kadilaacay qaybo badan oo wadanka kamid ah sida Gobolada Oromia, Canfarta iyo Axmaarada, wuxuuna taliska wayaanuhu dambi kadhigay sheegitaanka jiritaanka cudurkan.
Hadaba qaylada ay kooxda TPLF tu afka kudhufatay ayaa muujinaysa sida lookala lexjeclaystay waxa uu taliska wayaanuhu ugu yeesho kilalada Itoobiya ama qoomiyadaha Itoobiya. Taliska wayaanaha ayaa culays dareemay markuu cudurka daacuunku kudhacay Gobolka Tigreega halka ay dheesha ka qoslayeen marka uu Gobolada kale kudhacay.
Waxaa xusid mudame in u Tedros Adhanom oo loo magaacabay hayda Qaramada Midobay u qaabilsan caafimaadka aduunka ee WHO in u caalamka ka qariyay meelo ay ku jirto Ogaadeniya in u cudurka daacuunku ka dilaacay, markii ugu horaysay u shaqada bilaabayna waxa u soo saaray digniin u ku sheegayo in u Xajka cudurka daacuunku u ka dilaaco karo taas oo layaab ku noqotay caalamka.